नराम्रा सपना देख्नु भयो ? यसो गर्नुहोस् - Samudrapari.com
नराम्रा सपना देख्नु भयो ? यसो गर्नुहोस्
१८८५ पटक हेरिएको
सपनाले वास्तविक जीवनका धेरै पक्षबारे जानकारी दिन्छ । कहिलेकाही नराम्रा सपना देखिन्छन् जसका लगि केही विधि अपनाउनु जरूरी छ । यसो गरेको खण्डमा नराम्रा सपनाको दोष कट्टा हुन्छ ।
१. खराब सपना देखेर व्युँझियो भने फेरि सुतेपछी उत्तम सपनाको असर समाप्त हुन्छ।